Phinda ubhale kwakhona, Umvuzo, okanye Phinda ubhale umbhalo shintshi yegama
Ukuphinda ubhale ngokuzenzekelayo Umbhalo opheleleyo
Phinda ubhale kwakhona Umbhalo isiXhosa
Sikholelwa ukuba iiprobots kufuneka zibe zibhali zokubhala kwakhona. Umbhalo wokubhaliweyo uncedo kwi-injini yokukhangela injini (SEO), ukwenza iikopi zeencwadi okanye amaphepha, ngokuphindaphinda imixholo ngeendlela ezintsha, kunye nokugcina iiyure zomsebenzi womntu. Ukurhweba ngokutsha ngokuchanekileyo kumashishini okwangoku kwindleko yerhafu, kwaye asikholelwa ukuba kufuneka. Ngoko ke, sinika umatshini wethu wokubhala kwakhona kwiilwimi ezingaphezu kwe-100 ukuqinisekisa ukuba wonk 'ubani unakho ukufikelela kumandla okubhala kwakhona.
Yintoni Ndingayisebenzisa Le
Ukubhalwa kwakhona iincwadi
Ukubhalwa kwakhona amanqaku
Ukubhalwa kwakhona izithuba zoluntu
Ukubhalwa kwakhona umsebenzi wasekhaya
Ukubhalwa kwakhona incoko
Ukubhalwa kwakhona kwiwebhusayithi
Ukubhalwa kwakhona mihlathi
Ukubhalwa kwakhona i tekisi
Ukubhalwa kwakhona izivakalisi
Ukubhalwa kwakhona miyalezo
Ukubhalwa kwakhona njani amanqaku
Ukubhalwa kwakhona khokelo
Ukubhalwa kwakhona izahluko
Ukubhalwa kwakhona i nkcazo
Ukubhalwa kwakhona mabali eendaba
Ukubhalwa kwakhona iphepha lomxholo
Ukubhalwa kwakhona kumaphepha encwadi
Ukubhalwa kwakhona iphepha lewebhu
Ukubhalwa kwakhona ngeelwimi ezininzi
Ukubhalwa kwakhona catshulwa
Ukubhalwa kwakhona iifayili
Ukubhalwa kwakhona yokwenza iingcamango
Ukubhalwa kwakhona menus
Ukubhalwa kwakhona maxwebhu
Ukubhalwa kwakhona umsebenzi wesikolo
Ukubhalwa kwakhona iingxelo
Ukubhalwa kwakhona iilayidi zamandla
Ukubhalwa kwakhona google docs
Ukubhalwa kwakhona igama elithi docs
Ukubhalwa kwakhona iifayile
Ukubhalwa kwakhona iiwebhu
Ukubhalwa kwakhona i ntetho
Ukubhalwa kwakhona ii-imeyile
Ukubhalwa kwakhona gu qulelwa
Ukubhalwa kwakhona ukunyanzelisa
Ukubhalwa kwakhona iincwadi zezifundo
Ukubhalwa kwakhona ingxelo zebhu
Ukubhalwa kwakhona iincwadi zokufundisa
Yiyiphi Umbhalo ophinda ubhale umshini onokukwenza
Amanye amagama angezantsi akaguquleli kakuhle kwisiNgesi.
Ukubhala kwakhona umbhalo
ukuphinda ufunde umbhalo
lungisa kwakhona amagama
ukuphinda uphinde uchaze amanqaku
bhala i incwadi
nomhla wokubhala kwakhona
umatshini wokubhala ngokuzenzekelayo
utshintshe ngokuzenzekelayo amagama
Ukusetyenziswa kunye Neengcebiso ezicetyiswayo
Omnye Umhlathi kwixesha
Kungcono ukuphinda ubhale umhlathi omnye ngexesha ukwenzela ukuba umatshini abe ngcono ukuvavanya ukuba itekisi ithetha ntoni kwimeko yayo. Amancinci amancinci kulula kakhulu ukuba asebenze ukuvumela ukuba ubuyisele umphumo ongcono.
Ngamanye amaxesha kukho amabinzana kwiilwimi ezingabonakali kakuhle ngokubhalwa komatshini wokubhala kwakhona okanye iteknoloji yokuguqulela eyenza kunzima ukuphinda ubhale kwakhona. Ngokukhusela amabinzana athile, umshini wokuphinda ubhale uza kuba ngcono ukubhala kwakhona umbhalo wakho.
Gwema Umbhalo Ode
Ukude kubhaliweyo, kunzima kakhulu ukuba umbhalisi wokubhala kwakhona ubhale umbhalo ngenxa yokuba kunzima ukufumana intsingiselo yombhalo. Kungcono ukusebenzisa amanani amancinci ombhalo.
Hlola kabini Isiphumo Sakho
Umbhalo wokubhala kwakhona awuphelelanga, qinisekisa ukuba uhlolisise kwakhona ukubhalwa kwakhona kwembhalo emva koko ukuqinisekisa ukuba kukhangeleka. Kufuneka ukuba utshintshe igama okanye ezimbini.
Eyona miphumo emihle
Sebenzisa onke amacebiso kunye neengcebiso ngaphezulu!
Umzekelo I-Rewrite ibhala
Ukususela kuma-1960 kukho inkqubela phambili, kodwa ngokuqinisekileyo ayifumanekanga ekusukeni kwe-AI yomntu. Kunoko, njengoko kwimeko yeApollo, izi ngcamango ziye zifihliwe emva kweembonakalo, kwaye ziye zaba ngumsebenzi wabasebenzi abaphandi bajolise kwiingxaki ezithile zobunjineli. Nangona kungabonakali kuluntu jikelele, uphando kunye nokwakhiwa kwezixhobo kwiinkalo ezinjengokufunyanwa kwincwadi, ukufundwa kweetekisi, ukufunyanwa kobuqhetseba, iinkqubo zinconywa, uphando olwenziwe ngumntu, uhlalutyo lomnatha woluntu, ucwangciso, uvavanyo kunye novavanyo lwe-A / B luyimpumelelo enkulu- Le yile nkqubela phambili enikwe iinkampani ezinjengeGoogle, Netflix, Facebook kunye ne-Amazon.
Inkqubela phambili enziwe ukususela ngowe-1960, kodwa ingenakuphumelelwa ngokukhangela ukulandelelana kwe-AI yabantu. Kunoko, njengoko kwimeko ye-Apollo spacecraft, ezi ngcamango ziye zifihliwe emva kwezinto kwaye ziye zaba ngumsebenzi wabaphandi bajolise kwiingxaki ezithile zobunjineli. Nangona kungabonakali kuluntu jikelele, uphando kunye neenkqubo zokudalwa kwiindawo ezinjengokufunyanwa kwincwadi, ukuhlelwa kwetekisi, ukufunyanwa kobuqhetseba, iinkqubo zokucebisa, ukukhangela okwenziwa ngabanye, ukuhlalutya kwentanethi yoluntu, ukucwangcisa, ukuxilonga kunye novavanyo lwe-A okanye lwe-B ibe yimpumelelo enkulu . Ezi nkqubela ziqhube iinkampani ezifana ne-Google, iNetflix, i-Facebook ne-Amazon.
Ezinye iilwimi ezixhasiweyo
Abalingiswa bombhalo Abhalwe kwakhona
Sinikeza umshini wethu wokubhala kwakhona kwiilwimi ezili-100 ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, eli phepha liye labhalwa ngumguquleli. Ukuba ungathanda ukusinceda ngegrama okanye ngcebiso, nceda uqhagamshelane nathi ngezansi.
Xha ga mshelana kevind@ota.ai
I-API yokuPhumelela kokuFikelela
Okwangoku sinika umshini wethu wokubhala ngokuzenzekelayo ngeelwimi eziphantse ezili-100, kwaye unalo uluhlu lokulinda kwezinye iipogram zokugqibela ze-API. Ukuba ungathanda ukuqwalaselwa ukusebenzisa i-API, nceda uqhagamshelane nathi ngezansi (ngokukhethekileyo ngesi-english).
Eli phepha lalibhalwe ngesiNgesi kwaye liguqulelwe. Ukuba unezilungiso, nceda uthumele i-imeyile apha. kevind@ota.ai